Dharka mesh laastikada ah
Xafladda & Dharka Dharka Dharka
Dharka La Xiriira
Dharka Dharka Ilmaha
Dharka Sharafta leh
Marada Dahaarka ah ee Cad
Indhashareer La -Dhigay
Farshaxanka La Xiriira
Shiinaha mesh dhar
Xadhig -Tolidda Fabric Fabric
Dharka Farxada leh
Isticmaalka tamarta ee Shiinaha “dual control” oo la casriyeeyay iyo saamaynta ay ku leedahay warshadaha dharka ganacsiga ee shisheeye.
by admin on 09-29-21
Aad baad ugu mahadsan tahay daawashada warkan. Waxaa laga yaabaa inaad ogaatay in “koontaroolka isticmaalka tamarta laba -geesoodka ah” ee dhawaanahan ay saamayn gaar ah ku yeelatay awoodda wax -soo -saarka ee qaar ka mid ah shirkadaha wax -soo -saarka, iyo bixinta amarada warshadaha qaarkood waa in dib loo dhigaa. Intaa waxaa dheer, G ...
Fayraska “Delta” ee ku dhuftay Koonfur -bari Aasiya ayaa xaddidi kara qiimaha dharka spandex “
Nooca cusub ee “Delta” ee mutant wuxuu ka dillaacay difaacyada “ka-hortagga cudurrada faafa” ee dalal badan. Tirada guud ee kiisaska cusub ee la xaqiijiyay ee Vietnam ayaa kor u dhaaftay 240,000, iyada oo in ka badan 7,000 xaaladood oo cusub maalin keliya laga soo bilaabo dabayaaqadii bishii Luulyo, iyo Ho Chi Minh City, oo ah magaalada ugu weyn ...
Lace, markii ugu horraysay waxaa lagu xardhay marooyin gacmeed. Reer galbeedku waxay aad u isticmaalaan shalash badan dharka dumarka, gaar ahaan dharka fiidkii iyo dharka arooska. Markii hore waxay ka soo muuqatay Maraykanka. Samaynta xargaha waa hab aad u dhib badan. Waxaa lagu xardhay dun xariir ah ama dun sida ay p ...
Wadada xariirta ee saldhigga Keqiao ayaa aasaasay caasimadda dharka ee caalamiga ah
Markay timaaddo warshadaha dharka Shiinaha, Shaoxing waa la yaqaan. Si kastaba ha ahaatee, qaybta ugu caansan waa Keqiao. Taariikhda warshadaha dharka ee Shaoxing waxay dib u noqon kartaa 2500 sano ka hor. Xilligii boqortooyadii Sui iyo Tang (BC581-618), gobolkani wuxuu u kobcay heerka “noi ...
Kormeerka tayada qaranka Shiinaha iyo xarunta kormeerka (Zhejiang) ee alaabada dharka iyo kiimikada ee la dejiyay Shaoxing
Maalmahan, kormeerka tayada iyo tikniyoolajiyadda iyo machadka kormeerka Shaoxing wuxuu ka helay dukumiintiyo kormeerka suuqa qaranka Shiinaha iyo Xarunta maamulka, kaasoo oggolaaday inuu u diyaar garoobo sidii loo dhisi lahaa kormeerka tayada qaranka Shiinaha iyo xarunta kormeerka ee dharka iyo kiimikada labadaba ...
WADA TASHI BILAASH AH +86 13075958227
CINWAANKA Qolka 1202, 12 / F, Jixiang International Building, CBD, Degmada Keqiao, Shaoxing, Zhejiang